ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက် ကျော်လွန်. ရွှေ့စို့။ သုံးသဘောတရားများကြွယ်ဝသောစမ်းသပ်ချက်အဘို့အအသုံးဝင်သောနေသောခေါင်းစဉ်: တရားဝင်မှု, ကုသမှုသက်ရောက်မှုများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနှင့်ယန္တရား။
စမ်းသပ်ချက်အသစ်နေသောသုတေသနပညာရှင်များမကြာခဏဟာအလွန်တိကျတဲ့, ကျဉ်းမြောင်းသောမေးခွန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်: ဤကုသမှုကို "အလုပ်" သနည်း ဥပမာ, စေတနာ့ဝန်ထမ်းကနေဖုန်းခေါ်မဲပေးတစ်စုံတစ်ဦးကအားပေးပါသလဲ? စိမ်းလန်းသောတိုးကလစ်-မှတဆင့်နှုန်းအပြာကနေ website တစ်ခုခလုတ်ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ပါသလား ကံမကောင်းစွာပဲ, အဘယ်သို့သောအကြောင်းမြည်းကြိုးကိုဖြည်ထားသောစာပိုဒ်တိုများကျဉ်းမြောင်းစွာအာရုံစိုက်စမ်းသပ်ချက်ကယ့်ကိုကုသတဲ့ယေဘုယျသဘောတွင် "အလုပ်ဖြစ်တယ်" ရှိမရှိသင်ပြောပြကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုမိုက်စေသော "အလုပ်ဖြစ်တယ်" ။ ဤအချိန်တွင်သင်တန်းသားများ၏ဤလူဦးရေအဘို့ဤတိကျတဲ့အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့်အတူဤတိကျတဲ့ကုသမှုပျမ်းမျှအကျိုးသက်ရောက်မှုကားအဘယ်သို့: အစား, ကျဉ်းမြောင်းစွာအာရုံစိုက်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုပိုပြီးတိကျတဲ့မေးခွန်းဖြေဆို? ငါသည်ဤကျဉ်းမြောင်းတဲ့မေးခွန်းရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြောင်းစမ်းသပ်ချက်မခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာနှစ်ခုစလုံးဖြစ်ကြောင်းအများအပြားမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ပျက်ကွက်: ကုသမှုပိုကြီးတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူကိုဘို့အချို့ရှိလူဖြစ်ကြ၏ ?; ပိုပြီးထိရောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အခြားကုသမှုလည်းမရှိ ?; နှင့်မည်သို့ဒီစမ်းသပ်မှုကျယ်ပြန့်သည့်လူမှုရေးသီအိုရီမှဆက်စပ်ပါသနည်း
ရိုးရှင်းစမ်းသပ်ချက်ကျော်လွန်ရွေ့လျား၏တန်ဖိုးကိုပြသရဲ့အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံး Analog စလယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်တယောက်, လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ် P. ယ်စလီ Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကလေ့လာမှုတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့နိုင်ရန်အတွက် (Schultz et al. 2007) ။ Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များစန်းမားကို့စ, California မှာ 300 အိမ်ထောင်စုအပေါ် doorhangers ချိတ်ဆွဲနှင့်, ဤ doorhangers စွမ်းအင်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကိုအားပေးဖို့ဒီဇိုင်းကွဲပြားခြားနားသောမက်ဆေ့ခ်ျကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ ထို့နောက် Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တဦးတည်းတစ်ပတ်ပြီးနောက်သုံးယောက်ရက်သတ္တပတ်နှစ်ခုလုံး, လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲမှုပေါ်ဤအကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာ; စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦးပိုမိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအတွက် 4.3 ပုံကိုကြည့်ပါ။
ပုံ 4.3: ကနေဒီဇိုင်းသိထား Schultz et al. (2007) ။ လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်မှုတခုရှစ်တစ်ပတ်ကာလအတွင်းစန်းမားကို့စ, California မှာငါးကြိမ် 300 ခန့်အိမ်ထောင်စုလာရောက်လည်ပတ်ပါဝင်ပတ်သက်။ အသီးအသီးတွင်ကိုယ်တိုင်သုတေသီများသွားရောက်အိမ်တော်ကိုရဲ့ပါဝါမီတာကနေစာဖတ်ခြင်းကိုယူ။ လာရောက်နှစ်ယောက်တွင်သုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုပေးအိမျတျော၌ doorhangers တင်လိုက်တယ်။ အဆိုပါသုတေသနမေးခွန်းကဤမက်ဆေ့ခ်ျ၏အကြောင်းအရာစွမ်းအင်ကိုအသုံး impact မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုအခြေအနေနှစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းအတွက်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု၏ပျမ်းမျှနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပထမဦးဆုံးအခွအေနအတွက်, အိမ်ထောင်စု (အစားလေအေးပေးစက်၏ပရိတ်သတ်များကိုသုံး, ဥပမာ) ယေဘုယျစွမ်းအင်ကိုချွေတာအကြံပေးချက်များလက်ခံရရှိနှင့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်စုတစ်စုရဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များ။ Schultz နှင့်၎င်းတို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းရှိစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များပုံမှန်အမူအကျင့် (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးဖော်ပြရန်စံ) နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးကြောင့်ဖော်ပြရန်စံတန်ဖိုးခွအေနအေဒီဟုခေါ်တွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။ Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဒီအုပ်စုထဲမှာရရှိလာတဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုမှုမှာကြည့်ရှုသောအခါ, ကုသဖြစ်စေရေတိုရေရှည်သို့မဟုတ်ရေရှည်အတွက်, မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိထငျရှား; အခြားစကား, ကုသမှု "အလုပ်" (ပုံ 4.4) မှမထင်ခဲ့ပေ။
သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာ, Schultz et al. (2007) ဒီရိုးရှင်းတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့အနည်ထိုင်ဘူး။ ထိုစမ်းသပ်မှုခင်မှာသူတို့ယုတ်-စေခြင်းငှါ, သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုကိုလျှော့ချနှင့်လျှပ်စစ်မီး-လူမျိုး၏အလင်းအသုံးပြုသူများကိုအောက်တွင်ယုတ်-စေခြင်းငှါ, တကယ်ကသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ကြောင်းအထက်လျှပ်စစ်မီး-လူမျိုး၏လေးလံသောအသုံးပြုသူများအကြောင်းဆွေးနွေးနှီးနှောသစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့က data တွေကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါ, သောသူတို့သည် (ပုံ 4.4) ကိုတွေ့အတိအကျယျ။ ထို့ကြောင့်အဘယ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းခဲ့တဲ့ကုသမှုသဏ္ဍန်အမှန်တကယ်နှစ်ခု offsetting သက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ကုသမှုခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများသည်အလင်းကိုအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးထိကပြန်အကျိုးသက်ရောက်တို့တွင်အဒီတန်ပြန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတိုးကိုခေါ်။
မှရလဒ်များ: 4.4 ပုံ Schultz et al. (2007) ။ ပထမဦးဆုံးအ panel ကိုဖော်ပြရန်စံကုသမှုခန့်မှန်းခြေသုညပျမ်းမျှအားကုသအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသထားတယ်။ သို့သော်ဒုတိယ panel ကဒီပျမ်းမျှအားကုသအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအမှန်တကယ်နှစ်ခု offsetting သက်ရောက်မှုများ၏ရေးစပ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများအဘို့, ကုသမှုအသုံးပြုမှုလျော့ကျပေမယ့်အလင်းအသုံးပြုသူများအဘို့, ကုသမှုအသုံးပြုမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, တတိယ panel ကိုဖော်ပြရန်နှင့်တရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်းကိုအသုံးပြုရသောဒုတိယကုသမှု, အကြမ်းအားဖြင့်လေးလံသောအသုံးပြုသူများကိုအပေါ်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကွောငျးဖျောပွဒါပေမယ့်အလင်းသည်အသုံးပြုသူများအပေါ်ထိကပြန်အကျိုးသက်ရောက်လျော့ပါး။
ထို့ပြင် Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဒီဖြစ်နိုင်ခြေမျှော်လင့်, ဒုတိယအခြေအနေမှာသူတို့တစ်တွေအနည်းငယ်ကွဲပြားကုသမှု, ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာအထိကပြန်အကျိုးသက်ရောက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်တပ်ဖြန်။ ဒုတိယအခွအေနအတွက်အိမ်ထောင်စုထိုသူတို့၏ရပ်ကွက်အတွင်း-နှင့်တသားတသေးသေးလေးများအပြင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအတိအကျတူညီကုသမှု-ယေဘုယျစွမ်းအင်ကိုချွေတာအကြံပေးချက်များနှင့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်စုတစ်စုရဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိ: အောက်ပါပျမ်းမျှအားစားသုံးမှုနှင့်အတူလူတို့အဘို့, သုတေသီတစ်ဦး :) ဆက်ပြောသည်နှင့်များအတွက် အထက်-ပျမ်းမျှအားစားသုံးမှုနှင့်အတူလူသူတို့တစ်တွေ :( ဆက်ပြောသည်။ အဲဒီရုပ်ပြောင်သုတေသီတားမြစ်မိန့်စံချိန်စံညွှန်းကိုခေါ်ဘယ်အရာကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ကြသည်။ တရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်းများအားအတည်ပြု (နှင့်အတည်) သည်အဘယ်အရာ၏သဘောထားအမြင်ကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်းများအားပြုမိသောအမှုအရာကို၏သဘောထားအမြင်ကိုရည်ညွှန်းသော်လည်း (Reno, Cialdini, and Kallgren 1993) ။
ဒီတစ်ခုသေးသေးလေးအီမိုတီကွန်ပေါင်းထည့်ခြင်းအားဖြင့်, သုတေသီသိသိသာသာအထိကပြန်အကျိုးသက်ရောက်ပုံ (4.4) လျှော့ချ။ ထို့ကြောင့်ဒီတစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှု-တစ်ဦးတစ်ဦးစိတ္တဇလူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ကွောငျးပြောင်းလဲမှုအောင်အားဖြင့် (Cialdini, Kallgren, and Reno 1991) ဖွသုတေသီများတသို့အလုပ်လုပ်ရန်မထင်ခဲ့ကွောငျးတစျခုကနေ program တစ်ခုဖွင့်ဖို့နိုငျခဲ့ကွ အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူတို့လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းလူ့အပြုအမူကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံကို၏အထွေထွေဥာဏ်အထောက်အကူပြုနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ဤအချက်မှာ, သို့သော်, သငျသညျအရာတစ်ခုခုကဒီစမ်းသပ်မှုအကြောင်းနည်းနည်းကွဲပြားကြောင်းသတိထားမိပေလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်, Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏စမ်းသပ်မှုတကယ်ပြုပါထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက် randomized သောတူညီသောလမ်းအတွက်တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုရှိသည်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဒီဇိုင်းနှင့် Restivo ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဗန်က de Rijt တို့အကြားနှိုင်းယှဉ်သုတေသီများအသုံးပြုသောနှစ်ဦးကအဓိကဒီဇိုင်းများအကြားခြားနားချက်များဖော်ပြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt အဖြစ်အကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများအတွက်တစ်ဦးကိုကုသအုပ်စုတစ်စုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုရှိသည်, အတွင်း-ဘာသာရပ်များအတွက်ကုသမှုမီနှင့်ပြီးနောက်သင်တန်းသားများ၏အမူအကျင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်ဒီဇိုင်း (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) အသီးအသီးပါဝင်သူသူမ၏ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်အုပ်စုအဖြစ်ပြုမူလျှင်အဖြစ်အတွင်း-ဘာသာရပ်စမ်းသပ်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ (ငါအစောပိုင်းကဖော်ပြထားသကဲ့သို့) တို့အကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများ၏အစွမ်းသတ္တိကိုကရှက်ကြောက်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းနှင့်အတွင်း-ဘာသာရပ်များစမ်းသပ်ချက်၏အစွမ်းသတ္တိကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအတွက်တိုးမြှင့်တိကျသည်။ အသီးအသီးပါဝင်သူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ပြုမူအခါ, အကြား-ပါဝင်သူမူကွဲ (နည်းပညာနောက်ဆက်တွဲတွင်ကြည့်ပါ) ဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။ ငါဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုအကွံဉာဏျပူဇျောသောအခါနောက်ပိုင်းတွင်လာကြလိမ့်မည်သည့်ရှေ့ပြေးပုံရိပ်ရန်, နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုလည်းမရှိ, အတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများနှင့်အကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများဖွငျ့ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏တိုးတက်လာသောတိကျစွာပေါင်းစပ်တဲ့ရောထွေးဒီဇိုင်းကိုခေါ်။
ပုံ 4.5: သုံးခုစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများ။ စံထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်ချက်အကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများကိုသုံး randomized ။ တစ်ဦးအကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းကိုဥပမာအနေနဲ့ Restivo သည်နှင့်ဗန်က de Rijt ရဲ့ (2012) barnstars နှင့်ဝီကီပီးဒီးယားမှပံ့ပိုးမှုများအပေါ်စမ်းသပ်မှု: ကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများသို့သုတေသီများကျပန်းခှဲဝေသင်တန်းသားများ, ကုသမှုအုပ်စုတွင်ပါဝင်သူများတစ် barnstar ကို၎င်း, နှစ်ယောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရလဒ်များပေး၏ အုပ်စုများ။ ဒီဇိုင်း၏ဒုတိယတစ်မျိုးမှာအတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနှစ်ဦး Schultz အတွက်စမ်းသပ်ချက်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ (2007) လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းအပေါ်လေ့လာချက်နှင့်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုဟာအတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းကိုသရုပျဖျော: သုတေသီများခင်နဲ့ကုသမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်သင်တန်းသားများ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ အတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများ (နည်းပညာနောက်ဆက်တွဲတွင်ကြည့်ပါ) ဘာသာရပ်ကှဲလှဲအကြားဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်တိုးတက်လာသောစာရင်းအင်းတိကျပူဇျော, ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်နိုင်သောရှက်ကြောက်စေခြင်း (Pre-ကုသမှုနှင့်ကုသမှုကာလအကြားရာသီဥတုဥပမာအပြောင်းအလဲများ) မှဖွင့် (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) အတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများလည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံဒီဇိုင်းများဟုခေါ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရောထွေးဒီဇိုင်းများအတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများ၏တိုးတက်လာသောတိနှင့်အကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများဖွငျ့ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေါင်းစပ်။ တစ်ဦးရောနှောဒီဇိုင်းအတွက်, တစ်သုတေသီကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများရှိလူများအဘို့အရလဒ်များအတွက်အပြောင်းအလဲနှိုင်းယှဉ်။ များစွာသောဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်အတွက်အမှုဖြစ်သကဲ့သို့သုတေသီများပြီးသား, Pre-ကုသမှုသတင်းအချက်အလက်များလာတဲ့အခါရောထွေးဒီဇိုင်းများ (နည်းပညာနောက်ဆက်တွဲတွင်ကြည့်ပါ) သောကွောငျ့တိအတွက်အကျိုးအမြတ်၏အကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများဖို့ဦးစားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယေဘုယျအား, ဒီဇိုင်းနှင့်ရလဒ်များကို Schultz et al. (2007) ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက်ကျော်လွန်ရွေ့လျား၏တန်ဖိုးကိုပြသပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သငျသညျဤကဲ့သို့သောစမ်းသပ်ချက်ကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးပါရမီဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ 1) သက်တမ်းကုသမှုသက်ရောက်မှုများ၏, 2) သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနှင့် 3) ယန္တရားများ: လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာချမ်းသာနှင့်ပိုပြီးဖန်တီးမှုစမ်းသပ်ချက်မျက်နှာသို့သငျသညျကိုလမ်းပြလိမ့်မည်ဟုသုံးသဘောတရားများကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပါပြီ။ သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်မှုဒီဇိုင်းနေစဉ်သငျသညျစိတျထဲတှငျဤသုံးပါးစိတ်ကူးများစောင့်ရှောက်လျှင်က, သငျသညျသဘာဝကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အသုံးဝင်သောစမ်းသပ်ချက်ဖန်တီးလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဤသုံးပါးသဘောတရားများကိုသရုပျဖျောနိုင်ရန်အတွက်ငါအတွက်ကြော့ဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရလာဒ်များပေါ်တွင်တည်ဆောက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုအရေအတွက်ဖော်ပြရန်လိမ့်မယ် Schultz et al. (2007) ။ သင်ပိုမိုသတိထားဒီဇိုင်း, အကောင်အထည်ဖော်မှု, analysis နှင့်အနက်အားဖြင့်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, သငျသညျလညျးအရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက် ကျော်လွန်. ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။